သတို့သမီးမိတ်ကပ် 2017, အားလုံးခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်သတင်း! • musanews
Sabato၊ နိုဝင်ဘာ ၆၊ ၂၀၂၁
Ennio Morricone နှင့်အတူ Il Volo nel blu
ပင်မစာမျက်နှာ အသိုင်းအဝိုင်းခံစားပါ သတို့သမီးမိတ်ကပ် 2017, အားလုံးခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်သတင်း!
သငျသညျ 2017 သတို့သမီးများအတွက်မိတ်ကပ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား
Nude luke: သဘာဝသတို့သမီးမိတ်ကပ်ပုံသဏ္continuesာန်သည်ဆက်လက်တည်မြဲနေပြီး၎င်းသည်ကြည်လင်ပြတ်သားသောကြွေထည်အသားအရေကိုအလေးပေးဖော်ပြသည်။ beige, အမှုန့်သို့မဟုတ်ပန်းရောင်တို့၏အရိပ်ထဲတွင်မျက်လုံးအရိပ်နှင့်လိုက်ပါရန် Rosy သို့မဟုတ်မက်မွန်မျက်နှာမပျက်သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရိုးလေးဖြစ်ပုံရသော်လည်းလှည့် စား၍ မရသောကြောင့်သတို့သမီးသည်သဘာ ၀ အတိုင်းလှပသောသဘာ ၀ အရကြည့်ရှုရန်အလွန်ဂရုတစိုက်လေ့လာရမည်။ ဤမိတ်ကပ်သည်သဘာဝအလှအပကိုမြှင့်တင်ရန်ရွေးချယ်သောသတို့သမီးအနည်းငယ်အတွက်သာသင့်လျော်သည်။
နှုတ်ခမ်းများ - နှုတ်ခမ်းတောက်ပမှုသည်ဇာတ်ကောင်ဖြစ်လာသည်။ သဘာဝ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာသောသို့မဟုတ်ပန်းရောင်တောက်ပမှုသည်ပါးစပ်ကိုအာရုံစူးစိုက်စေပြီးသတို့သမီးကိုသဘာဝမိတ်ကပ်နှင့်ပြည့်စုံစွာလန်းဆန်းစေခြင်း၊ သင့်တွင်မမှန်သို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်ပါးလွှာသောနှုတ်ခမ်းများရှိလျှင်ရှောင်ရှားရန်။
ဤလမ်းကြောင်းနှင့်အတူတောက်ပသောနှုတ်ခမ်းဆီသို့ ဦး တည်သည့်လမ်းကြောင်းမှာ - အနီရောင်၊ ချယ်ရီသို့မဟုတ် marsala - ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်, မျက်စိမိတ်ကပ်ပါးစပ်အလေးပေးရန်အလွန်ရိုးရှင်းလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်နှုတ်ခမ်းနီကိုရွေးချယ်ပါက satin texture ဖြင့်ရွေးပါ။ ဒါကြောင့်လုံးဝ pearlescent သူတွေကိုလုံးဝမပါဝင်တဲ့သူတွေကိုမှလုံးဝ! Eyeshadows နှင့် glitter: Ethereal အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်အလင်း, ပျော့ပျောင်းနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအရိပ်တွေအများကြီး။ Smokey မျက်လုံးများသည်အမြဲတမ်းလက်ရှိရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအများအားဖြင့်အရိပ်များသည်ရွှေနှင့်ကြေးဝါကဲ့သို့မှောင်မိုက်သောအရောင်များဖြစ်သည်။ ဟုတ်ကဲ့တောက်ပနေပေမယ့်ညနေခင်းအတွက်သာဖြစ်ပြီးမ overdoor ဖို့သတိထားပါ။
Eyeliner: ကြည့်ရှုခြင်းပိုမိုနက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်နက်ရှိုင်းစေရန်အတွက်အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်လာသည်။ ဤကိစ္စတွင်နှုတ်ခမ်းများသည်အလွန်သဘာဝကျလိမ့်မည်။
မှားယွင်းသောမျက်တောင်များ - ယခုသူတို့သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအပြင်သဘာ ၀ အရကြည့်ရှုလိုသောသတို့သမီးအားလုံးအတွက်သင့်လျော်သည်။ မကြာခဏ eyeliner နှင့်အတူပေါင်းစပ်ပေမယ့်ဤအမှု၌ကမျက်စိအရိပ်နှင့်အတူက overdo မသာ။ ကောင်း၏။
ထို့ကြောင့်လမ်းကြောင်းသစ်သည်သတို့သမီးတိုင်း၏အလှအပကိုမည်သို့မြှင့်တင်ရမည်ကိုသိသောအလွန်တောက်ပသော bon ton အသွင်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ အဘယ်သို့မိတ်ကပ်ကိုရွေးချယ်မည်နည်း
ဆောင်းပါးရင်းမြစ် - www.nozzadvisor.it
ယခင်ဆောင်းပါးဆောင်းရာသီ 2017 မိတ်ကပ်: NARS အလှကုန်များ၏ Bella Hadid ထောက်ခံစာ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များ
နောက်ဆောင်းပါးCosmoprof Worldwide Bologna ကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှု
3ပြီလ 2021, XNUMX
INSTAGRAM အတွက်ဓါတ်ပုံများကိုဘယ်လိုတည်းဖြတ်မလဲ♡ | TUMBLR စတိုင်
နိုဝင်ဘာ 6, 2017